प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशः ‘इद मुवारक’
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इस्लाम धर्मावलम्बीको महान् चाड इद उलफित्रले विविध धर्म र संस्कृति अङ्गाल्ने नेपालका सबैमा सौहाद्रता र राष्ट्रिय एकताको भावना अझै मजबुत बनाउन प्रेरित गरोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नु भएको छ । शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले पवित्र महिना रमदानको बिदाइसँगै
शक्तिशाली धामी बन्न बालकको हत्या
जनकपुरधाम। शक्तिशाली धामी बन्नका लागि धनुषाको मिथिला नगरपालिका ६ ढल्केबरमा अढाई वर्षीय अवोध बालकको हत्या भएको खुलेको छ । स्थानीय शत्रुधन महतोले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा ‘शक्तिशाली धामी’ बन्न बालकको हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन् । बुधबार पक्राउ परेका उनलाई आज प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक
बृद्धभत्ता ३ हजार पुग्यो
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजार बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन् । यसअघि सरकारले २ हजार वृद्धभत्ता दिँदै आएको थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोक । सूचना तथा सञ्चार, प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एक बालकलाई आँगनदेखि नै डोर्‍याउँदै उनको कोठामा लगेर कापी–किताब माग्नुभयो । बालकले आफ्नो ब्यागमा भएको सबै किताब–कापी क्रमैसँग मन्त्री बाँस्कोटाको हातमा राखिदिए । पाँचखाल नगरपालिका–१२ बालुवामा रहेको सुजन दनुवारको घरमा
पाँचथर हत्याकाण्डमा ९ जनाको एक चिहान,शंकास्पद व्यक्तिको शव भेटियो
पाँचथर । पाँचथरको दक्षिण पश्चिमी गाउँ मिक्लाजुङ गाउँपालिका दुई परिवारका ९ जनाको हत्या भएको छ । हत्या हुनेहरुमा ३६ वर्षीया जस्मिता फियाक, ४१ वर्षीय धनराज शेर्मा, २६ वर्षीया मनकुमारी फियाक, ६ वर्षीया इक्सा शेर्मा, १३ वर्षीया योवना शेर्मा, आठ वर्षीया मुना शेर्मा, ७४ वर्षीय बमबहादुर फियाक, बमबहादुरकी श्रीमती
काठमाडौं । विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिले यही जेठ ११ र १२ गते पोखरामा आयोजना गर्ने ७ औं राष्ट्रिय महासभा (अधिवेशन) को तयारी पूरा भएको बताएको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो जानकारी दिएको हो । समितिका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र अधिकारीले उक्त महासभामा
डोटी । जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडामा गएको तीन वर्षको अवधिमा १६३ बालविवाह भएको एक संस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लामा लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) नामक एक संस्थाले तीन वर्षदेखि गरेको सर्वेक्षणअनुसार यति ठूलो सङ्ख्यामा बालविवाह भएको
काठमाडौ : नेपाल प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न भागबाट यौन व्यवसायमा संलग्न रहेको आरोपमा १सय२५ जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले नयाँ बसपार्क, गौशाला, पुरानो बसपार्क, बागबजार, चावहिललगायतका क्षेत्रमा बाटोमा बसेर महिलालाई फकाएर विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगेर अनैतिक क्रियाकलाप
बुवाको हत्या छानबिनको माग गर्दै छोराछोरीले मिडिया गुहारे
काठमाडौं । सुर्खेत विरेन्द्रनगर–१ का ४५ वर्षीय चन्द्रप्रसाद आचार्यको हत्या भएको ७१ दिन बितेपनि प्रहरीले घटनाको सत्यतथ्य जानकारी बाहिर नल्याएको भन्दै उनका छोराछोरीले मिडिया गुहारेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै छोरा तिलकराज आचार्य र छोरी संगीता आचार्यले आफ्नो बुवाको हत्या
भाउजुको प्रेममा डुबेका मुकेशले पेट्रोल छर्केर श्रीमती जलाए
जनकपुरधाम । धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका –१ चिरैया टोल बस्ने मुकेश गोईतले भाउजुसँगको अवैध सम्बन्धको कारण पत्नीको हत्या गरेको खुलेको छ । वैशाख ५ गते गोइतले पत्नी निर्मलाको जिउमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएका थिए । घटनापछि फरार भएका उनलाई धनुषा प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । धनुषाका प्रहरी प्रमुख
कुनै प्रकारका तानाशाही व्यवस्था काङ्ग्रेसलाई मान्य हुँदैन:देउवा
काठमाडौं : नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै प्रकारको तानाशाही व्यवस्था काङ्ग्रेसलाई मान्य नहुने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौं जिल्ला समितिले शुरु गरेको ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेश’ अभियानको आज शुभारम्भ गर्दै उनले राणा शासन र राजा फालेका काङ्ग्रेसलाई कुनै प्रकारका तानाशाही
‘ओलीले मोदीकै नक्कल गरेर जनकपुरमा कुर्ता–सुरुवाल लगाए, यो भारतप्रतिको लम्पसारवाद हो’:कांग्रेस नेता खतिवडा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले मुलुक यतिबेला मुलुक अप्ठेरोमा रहेको बताएका छन् । सरकारले पानीजहाज, रेल र सुनको कुरा सुन्दा निन्द्रा नै नलाग्ने अवस्था भैसकेको उनले व्यंग्य गरेँ । सोमबार राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि
आमा आर्शीवादको पर्खाइ...
काठमाडौं। चावहिल कुटुवहालकी दीक्षा श्रेष्ठ बिहानै मिठाइ किन्ने पसल चहार्दै थिइन् । भक्तपुरमा रहेकी आमाको मुख हेर्न जाने तयारीमा रहेकी उनले भनिन्‘छिटो–छिटो काम सकाएर गइहाल्नु पर्छ ।’३५ वर्षिय उनले सानैदेखि आमाको मुख हेर्ने दिन मान्दै आएको बताइन् । दीक्षामात्र होइन हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने सबैले
सुबेदार थापा नायक कि खलनायक !
नेपालमा भूकम्पको सम्भावना नकार्न मिल्दैनःविज्ञ
काठमाडौं । नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएको मुलुक भएकाले यसको सम्भावना नकार्न नमिल्ने टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन् । गोरखा भूकम्पका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा.ज्योति कोइरालाले नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले यसबाट बच्चे उपायबारे सधैं चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन् । वैशाख १२ को ‘गोरखा
बिहानै काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का, नौबिसे केन्द्रबिन्दू ५.२ म्याग्निच्युडको पराकम्प
काठमाडौँ । बुधबार बिहान काठमाडौँमा भूकम्प गएको छ। बिहान ६ बजेर २९ मिनेट जाँदा पहिलो र ६ बजेर ४१ मिनेटमा अर्को धक्का महसुस गरिएको हो। नौबिसे धादिङ केन्द्रबिन्दू भएर ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौं उपत्यकासहित नुवाकोट, धादिङलगायतका
मौसमपूर्वानुमान भन्छः चट्याङ, वर्षा एवं हावाहुरीको सम्भावना
काठमाडौं । मंगलबार देशभरको मौसममा परिवर्तन हुने र हवाहुरीसँग वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ । न्यूनचापीय रेखा पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्दै गएकाले आंशिकदेखि सामान्य मौसम बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ । पहाडी भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र हुरीबताससहित हल्का वर्षा
काठमाडौं । रक्त क्यान्सरबाट पीडित बालिका उर्वसी केसीको खर्च अभावमा उपचारमा समस्या भएको छ । दोलखा चरिकोट गाँउपालिका–५ घर भई हाल काठमाडौं मनमैजुमा बसोवास गरिरहेकी पाँच वर्षीय बालिकाको उपचारमा लाग्ने खर्चको जोहो नहुँदा समस्या भएको परिवारले जनाएको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार
म्याग्दी । मुस्ताङको कागबेनीमा तीर्थयात्रीको भीड शुरू भएको छ । शनिवारदेखि चैते दशैं शुरु भएकोले कागबेनीमा पितृ तर्पण दिए मुक्ति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासका कारण हिन्दुधर्मावलम्बी हरेक वर्ष त्यहाँ पुग्ने गर्छन् । तीर्थयात्री लगायत घुम्नलाई त्यहाँ पुगेका आन्तरिक पर्यटकको भीडले मुस्ताङको मुक्तिनाथ,कागबेनी
वीरगञ्ज, चैत २२ गते । हावाहुरीबाट बारा र पर्सा जिल्लाका पीडितहरुलाई अव्यवस्थित रुपमा राहत वितरण भइरहेको व्यापक गुनासो आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ । हावाहुरी प्रभावितलाई विभिन्न सङ्घसंस्था वा व्यक्तिहरुले राहत वितरण गर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन
१२ जना नेपाली किशोरीको नयाँ दिल्लीबाट उद्धार
काठमाडौं । दिल्ली महिला आयोगले भारतको राजधानी सहर नयाँ दिल्लीका विभिन्न स्थानबाट छापा मारी १२ जना नेपाली किशोरीको उद्धार गरेको जनाएको छ । उद्धार गरिएका किशोरीले एकजना उदय नाम गरेका व्यक्तिले दुबई र खाडीका अरु मुलुकमा कामको प्रलोभन देखाएर नयाँदिल्ली ल्याएको बताएका छन् । आयोगका सदस्य किरण नेगीको अगुवाइमा
दाने बोहरा । हुम्ला । सिमकोट गाउँपालिकाले सोमबार आठ ओटै वडा महिला समुहका एक सय आठ सदस्यहरुलाई नौ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सामाग्री वितरण गरेको छ । गाउँपालिको पशु सेवा शाखामा दर्ता भएका पाँच ओटा महिला समूहलाई त्रिपाल तथा सौर्य टुकी, ऊन काट्ने कैची तथा काईयो वितरण गरिएको हो । पशु सेवा शाखा प्रमुख तथा
फोटो खिच्ने व्यवसाय सुरु गरेर ईन्दु देवी साह समाजका हरेक महिलाहरु का लागी उदहारणी पात्र बनेकी छिन् । बारा जिल्लको बरियारपुरमा अवस्थित महागढिमाई मन्दिर परिसर भित्र फोटो खिच्ने व्यवसाय सुरु गरी ईन्दु देवी साहले आफ्नो कामको कला देखाई मन्दिर भित्र आउने सम्पुर्ण दर्शनार्थीहरुलाई अचम्मित पारेकी छिन् । अहिलेको
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमार्फत् सारभूत समानतासहितको समतामूलक समाजको निर्माण गरी समृद्धिको यात्रामा
काठमाडौँ, फागुन २० गते । महाशिवरात्रिका अवसरमा आज दिउँसो २ बजेसम्म तीन लाख बढी दर्शनार्थीले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । यस वर्ष विगतभन्दा दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढेकाले पशुपति क्षेत्रमा मानिसको घुइँचो छ । हालै भारतको प्रयागराजमा भएको कुम्भ मेलाका केही
काठमाडौँ, २० फागुन - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहमा सरिक हुनुभएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट त्यहाँस्थित सैनिक स्मारकमा पुष्पहार चढाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नाका साथै नेपाली सेनाद्वारा
काठमाडौं । चौथौं नेपाल लायन्स फेष्टिबल कार्यक्रम फागुन १८ गते शनिवार भक्तपुरमा आयोजना हुने भएको छ । लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय मल्टिपल डिष्ट्रिक्ट–३२५ अन्तर्गत नेपालभरका लायन सदस्यले भाग लिने कार्यक्रमको आतिथ्य डिष्ट्रिक्ट ३२५ ए–२ ले गर्नेछ भने फेष्टिबल सम्पन्न गर्नका लागि भक्तपुरका लायन्स क्लबहरूले
सह–सचिवले ज्यान लिन खोज्यो भन्दै पण्डित ढकाल दम्पती रुँदै मिडियामा
काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिका–२ का क्षेत्रप्रसाद ढकालले आफुलाई आफ्नै छिमेकी तथा नेपाल सरकारका सह–सचिव रुद्रप्रसाद लामिछानेले कुटपिट गरेको भन्दै न्यायको लागि सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित ढकालले रुद्र प्रसाद लामिछानेले आफुलाई पद र शक्तिको
नयाँ घर निर्माण गर्दै चिडियाखाना
काठमाडौँ, फागुन १२ गते । जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखाले जीव जनावर राख्न नयाँ र आधुनिक किसिमका नयाँ घर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । चिडियाखानामा सूचना अधिकारी लिना चालिसेका अनुसार रेड पाण्डाका लागि तातोचिसोसहितको नयाँ घरको निर्माण भइसकेको छ भने नीलगाई, स्याल र सारसका लागि पनि बस्नका लागि नयाँ
संगत राम्रो राख्न चाणक्यको संदेश
एक कविले भनेका थिए, “कसैलाई बुझ्न नखोज, उसलाई बुझ्दैमा त्यो मान्छे आफ्नो हुँदैन ।” तर तपाईँको सबैभन्दा नजिक जो छ, उसलाई त बुझ्नै पर्छ । किनकि उसले धोका दिएको खण्डमा तपाईलाई सबैभन्दा धेरै आघात पुग्न सक्छ । अब हामी सबैको मनमा एउटा कुरा आउँछ । मान्छेको स्वभाव कसरी बुझ्ने त ? आचार्य चाणक्यको सबैभन्दा ठुलो